Hướng dẫn 15+ cách diệt trừ Ốc Bươu Vàng gây hại nghiêm trọng trên lúa | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Hướng dẫn 15+ cách diệt trừ Ốc Bươu Vàng gây hại nghiêm trọng trên lúa | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Hướng dẫn 15+ cách diệt trừ Ốc Bươu Vàng gây hại nghiêm trọng trên lúa | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Inkumba etyheli enegama lezenzululwazi iPomacea canaliculata, yinkumba yosapho (iAmpullariidae, iklasi yeGastropoda), iphylum Mollusca, inzalelwane yaseMbindi nakuMzantsi Melika, lutshaba lwamafama erayisi.
1 Iimpawu zenkumba yegolide
1.1 Iimpawu zesakhiwo
1.2 Iimpawu zebhayoloji
1.3 Iimpawu eziyingozi
2 Amanyathelo okuthintela iinkumba ezityheli
2.1 Iindlela zokulima, ubugcisa
2.2 Amanyathelo ebhayoloji
2.3 Amanyathelo amachiza
2.4 Qaphela xa usebenzisa isitshabalalisi senkumba yeapile etyheli
Iimpawu zenkumba yegolide
☑ Amaqanda abapinki mnyama xa esandula ukubekwa kwaye apinki ophaphathekileyo xa ekufutshane nokuqanduselwa, ancamathele kumasebe emithi kunye nezinto eziqinileyo.
☑ Unemilo engqukuva yamanqatha, kuquka intloko, umzimba kunye nemilenze. Intloko ineepere ezimbini zeentente (enye inde enye imfutshane).
☑ Umzimba uphumle emilenzeni, ubunzima obujijekileyo bufihlwe kwiqokobhe. Imilenze ibanzi, imile okwediski, imhlophe bukhrim kwicala le-ventral.
☑ Intloko kunye nemilenze ihlala iphuma kwiqokobhe xa ishukuma. Umzimba wonke wale nkumba ukhuselwe liqokobhe.
☑ Iinkunzi ziphakame kancinci, amaxolo omlomo ajikajikayo, iimazi zinamaxolo athe tyaba, ajika kancinci.
☑ Zibeka amaqanda ngokwamaqela, indlwane nganye malunga nama-200-300 amaqanda malunga neeyure ezintathu. Ukuba iimeko zichanekile, inani lamaqanda linokufikelela kuma-500 – 600 amaqanda / isidleke.
☑ Emva kweentsuku ezisi-7 ukuya kwezili-15, amaqanda aya kuqanduselwa abe ziinkumba ezincinci. Inqanaba lenkumba yabaselula likhula ukusuka kwiintsuku eziyi-15-25, lilandelwa linqanaba lenkumba yabantu abadala (iintsuku ezingama-26-59).
☑ Umjikelo oqhelekileyo wobomi benkumba ziintsuku ezingama-60 kwaye inkumba etyheli inokuphila ukuya kwiminyaka emi-4-6.
Inkumba etyheli Unokuhlala emanzini okanye emhlabeni ngenxa ye-gill slits kunye namalungu afana nemiphunga. Ziyakwazi ukuphila kangangeenyanga kwiimeko ezibharhileyo ngokuvala iziciko zazo zize zizigqumelele nzulu emhlabeni.
v Ngokukodwa, banokuphila kwiindawo ezingcolileyo, ezingenayo i-oxygen ngenxa yeetyhubhu zokuphefumla.
Inkumba etyheli ingahlala emanzini kumaqondo obushushu ukusuka ku 0 ukuya ku 32oC kwaye iphile kumhlaba owomileyo iinyanga ezi 6 xa iimeko zendalo zingenamanzi.
Inkumba etyheli zikholisa ukuwela izityalo ezincinci zerayisi okanye amahlumelo amatsha ukusuka kanye emva kokuhlwayela de izityalo zerayisi zibe neentsuku ezingama-30 ubudala, zisebenza kakhulu ekuseni, ngorhatya nasebusuku.
Kumasimi erayisi, iimpawu zokuba inkumba ye-apile emthubi iyingozi zezi: ukwenza amagqabi kunye neendiza zerayisi zidada phezu kwamanzi okanye isityalo serayisi sinqunyulwe kwisikhondo.
Izinga lomonakalo: 1 inkumba yeapile etyheli (2 – 3 cm)/m2 eyenza umonakalo kwixesha le-3 – 20 iintsuku emva kokutshintshwa kuya kunciphisa isivuno serayisi nge-15 – 20%. Ukuba ubuninzi buyi-6 – 10 inkumba ye-apile etyheli/m2, amasimi okuhlwayelwa kwerayisi aya kunyamalala emva kosuku olu-1 kuphela nobusuku.
Amanyathelo okuthintela iinkumba ezityheli
Iindlela zokulima, ubugcisa
☑ Wenze mcaba ngokucokisekileyo umhlaba, uthintele iindawo ezigcwele amanzi ebaleni.
☑ Khetha iintlobo ezilungileyo ezinezinga eliphezulu lokuntshula.
☑ Galela isichumiso iUrea, NPK (60 – 70 kg) + Hop Tri Super Humic (2 – 3 kg)/hektare xa kwiintsuku ezingama-21 emva kokutshintshwa, ukunceda izityalo ezincinci zerayisi zikhule zisempilweni kwaye zicuthe inani leenkumba eziyingozi ezityheli.
☑ Bamba iinkumba kunye namaqanda ngesandla, ngakumbi ekuseni okanye emva kwemini.
☑ Beka intsimbi, inayiloni okanye i-bamboo trellis inethi kwimisele, izinyini zamanzi ukuthintela ukunwenwa kweenkumba, kwaye kulula ukuziqokelela. Umnatha kufuneka ubekwe kwangethuba, ukususela ekuqaleni kwesivuno ukuya kwixesha lokuvuna.
☑ Yenza umngxuma wokuhambisa amanzi (25 x 5 cm) ube yi-10-15m ukuqelelana emasimini ukuze iinkumba zihlangane emseleni ukudala iimeko ezifanelekileyo zokuqokelelwa kwezandla.
☑ Ncamathisela iipali zoqalo neengcongolo kwiindawo eziphuphumayo, imijelo yokunkcenkceshela emasimini ukuze iinkumba zikwazi ukuzala zize ziziqokelele ngesandla.
☑ Yenza umda ngothuthu okanye ikalika ujikeleze indawo echaphazelekayo. Nini inkumba etyheli Ukuba ukhwela phezu konxweme, uya kufa ngenxa yokuphelelwa ngamanzi emzimbeni.
☑ Lawula ulawulo lwamanzi ngokutsala amanzi ngamaxesha athile, ugcine umphakamo wamanzi ube yi-2-3cm ephantsi ukunqanda intshukumo kunye nomonakalo.
☑ Sitshiza iHop Tri CaSi 30 ml/ 16 yelitha yebhotile kwisithuba seentsuku ezili-10 ukuya kwezili-12 emva kokuhlwayela ukunika iSilicon ukunceda izityalo zerayisi ukuba zomelele kwaye zinciphise iziphumo ezinobungozi zenkumba ye-apile etyheli.
☑ Imirhumo yebhayoloji
✔️ Sebenzisa amagqabi ecassava, amagqabi epapaya, amagqabi ebhanana, imicu yejackfruit, … zibophe uzibeke emanzini ukurhwebesha iinkumba uze uzibambe.
✔️ Sika iCactus uyibeke emanzini, incindi enetyhefu yenza iinkumba zinxile, zidada ngaphezulu ukuze zincede ukuqokelela iinkumba ngokulula.
✔️ Amadada angakhululwa emva kokugquma okokugqibela aze akhokele amanzi ebaleni okanye akhulule amadada kanye emva kokuvuna, 1,000m2 kufuneka nje ukukhulula amadada angama-20 ukunciphisa kakhulu iinkumba ezityheli.
Izityalo zomgibe: Sika ingca eluhlaza ukugquma intsimi, kunye nesici sokuzifihla emini baya kukhasa kuyo, ngokuhlwa baphume baye kuqokelela.
Isibatha sobisi: Xuba iilitha ezi-4 zamanzi + neilitha e-1 yobisi uze ugalele ilaphu kulo. Beka ilaphu kwindawo ekwaphuke kuyo inkumba etyheli. Ngentsasa elandelayo, qokelela ilaphu elineenkumba ezityheli kwaye ulitshabalalise.
Beer trap: Sebenzisa i-2.5kg yerayisi emanzisiweyo kunye nombona ukuntshula, emva kweentsuku ezi-3 zokuntshula, galela amanzi kwaye ubilise, wandule upholise, udibanise i-0.5kg yeswekile kwaye ufukamele iintsuku ezintathu.
Galela lo mxube ungentla kwitoti uze uwubeke ebaleni ukuze umlomo wetoti ulingane namanzi. Ivumba elimnandi liya kutsala iinkumba ezityheli eziqokelelwe kwitoti. Beka umgibe emva kwemini epholileyo kwaye uqokelele ekuseni.
☑ Ukusebenzisa imifuno njengeyeza
Thatha amagqabi eoleander 30-40 kg amagqabi/ha, imbewu ye 20 – 30 kg yembewu/ha okanye iingcambu zentlanzi yamayeza 30-40 kg yeengcambu/ha. Zonke zomisiwe kwaye zityunyuzwe, zifafazwe kwintsimi, amanzi agcinwe kwi-3-5 cm. Emva kokutya iinkumba ziya kufa.
Ukusetyenziswa kwesitshabalalisi senkumba yeapile:
Iyeza likwimo yomgubo ofunxa amanzi, osebenza kwinkqubo yokuphefumla kunye nenkqubo yokwetyisa.Ichiza lihamba ngamanzi emlonyeni wenkumba, litshabalalisa inkqubo yokwetyisa yenkumba neyokuphefumla.
Emva kosulelo lwechiza, iinkumba ziya kuba namagwebu emlonyeni, ziyeke ukusebenza kwaye zife kwiiyure ezingama-24. Bulala zombini iinkumba, iinkumba eziziintsana namaqanda asandul’ ukuqanduselwa.
Izithako: Niclosamide 70%
Ukusetyenziswa: I-250g/ha ixutywe neelitha ezingama-400 zamanzi. Xuba ichiza le-5g/i-8 yelitha yebhotile yokutshiza iibhotile ezi-5 nge-1000m2, fafaza phambi okanye kanye emva kokuhlwayela.
Inkumba yegolide iyeza elikhethekileyo, inefuthe lomphunga kunye nencasa enetyhefu. Iyeza lisebenza ngokukhawuleza kwaye linamandla kwinkqubo yokuphefumla, ngokukhawuleza lithintela ukuphefumla kunye ne-enzymes yokugaya ye-snail, inhibiting metabolism emzimbeni we-snail, ebangela ukuba inkumba iyeke ukonakalisa nokufa.
Indlela yokusebenzisa: xuba i-18g pack/16 litre yebhotile ukutshiza i-1 sao ye-500 m2. Ukutshiza emva kokuhlwayela irayisi, xa amanzi egalelwa kwintsimi okokuqala.
Ichiza lisebenza kwiinkqubo zokuphefumla kunye nezokugaya ukutya kweenkumba, ezithintela i-enzymes zokuphefumla kunye ne-metabolism, ngoko zibulala inkumba ngokukhawuleza nje ukuba inkumba ifumane ichiza.
I-PISANA 700WP isasazeka ngokukhawuleza kwindawo yasemanzini, ibulala ngokupheleleyo iimbumba ezinkulu, iincinci ezincinci kunye namaqanda e-snail emva kokutshiza kwe-1 kuphela, ukunciphisa umonakalo kwirayisi kwasekuqaleni.
Izithako: Niclosamide 700 g/kg, Ukongeza nje ngokwaneleyo 1 kg
Tshiza iintsuku ezi-1-2 phambi kokuhlwayela: Faka isicelo eBusika-eNtwasahlobo, kwizityalo zasekwindla-ebusika.
Emva kokugqiba ukulima kokugqibela, gcina umgangatho wamanzi ebaleni ukusuka kwi-3 ukuya kwi-5 cm (ukuze iinkumba zingangeni emhlabeni), xuba i-35 g yebhotile ye-Pisana 700WP/16 yelitha kwaye utshize ngokulinganayo ebaleni (umsebenzi omnye malunga ne-1 16 yebhotile yelitha) ).
Qhubeka ukugcina amanzi ezinye iintsuku ezi-1-2 ukuze uvumele iinkumba zife ngokupheleleyo kwaye emva koko ukhuphe amanzi kwaye uhlwayele ngokuqhelekileyo.
Tshiza xa ugalela amanzi okokuqala (intsuku ezisi-7 – 10 emva kokuhlwayela): Ngesiqhelo kwisityalo sasehlotyeni-ekwindla.
Umthamo: xuba i-35 g/16 yebhotile yelitha okanye ibhotile yokutshiza iilitha ezingama-25 kumsebenzi o-1 (1,000m2).
☑ Xa umgangatho wamanzi endle usuka kwi-3 ukuya kwi-4 cm, sebenzisa idosi: 25 – 30 g/1000 m2
☑ Xa umgangatho wamanzi endle ungaphezulu kwe-5 cm, sebenzisa idosi: 35 g/1000 m2.
☑ Musa ukuxuba amayeza kunye nembewu enokuthi ichaphazele intsholongwane yerayisi.
☑ Musa ukuxubana nomgquba ukuze usasazeke kuba wehlisa ukusebenza kwechiza.
Iimbumbulu zomhla wokugqibela
Ukusetyenziswa: ukuxinana okuphantsi kwe-1-2 kg / ha, i-high 10 intlanzi / m2 isasazeka i-6-8 kg / ha. Yanabeleka ube ngamaqela aqelelene nge-3m (5-10g/iqela) ngaselunxwemeni nalapho iinkumba zama-apile ezityheli zidibana khona, zisasazwe emva kwemini epholileyo.
Isilwanyana sinoqhagamshelwano oluqinileyo kunye nefuthe elinobuthi, ngoko emva kokutya i-bait, i-snail iya kukhawuleza ikhuphe i-viscous, iiseli ze-mucous ziyatshatyalaliswa, zibangele ukuba inkumba ilahlekelwe ngamanzi kwaye ife.
I-MILAX 100GB ikhuselekile kwizityalo zerayisi kwaye inokusetyenziswa ngokuguquguqukayo: phambi kokuhlwayela, xuba nembewu xa uhlwayela kwaye udibanise nesichumisi emva kokuhlwayela, uncede ukonga xa utshiza.
Izithako: Metaldehyde 100g/kg, izongezo nje ngokwaneleyo 1 kg
Umthamo: 400 – 500 g / 1,000 m2 okanye 4-5 kg ​​/ ha. (Kuxhomekeke kubuninzi beenkumba ebaleni).
Ukuxuba imbewu: Emva kokugqiba ukulungisa umhlaba, gcina umgangatho wamanzi entsimini ukusuka kwi-3 ukuya kwi-10 cm kwaye uluyeke udaka luhlale ubusuku obu-1. Imbewu kanye phambi kokuhlwayela i-5 kg ​​ye-MILAX 100GB enomlinganiselo ofanelekileyo wembewu kwihektare enye (0.5 kg Milax/1,000 m2).
Sasaza phambi kokuhlwayela: Emva kokulima okokugqibela, gcina inqanaba lamanzi entsimi ukusuka kwi-3 ukuya kwi-10 cm kwaye ushiye ubusuku bonke ukuze udaka luzinze, sebenzisa i-4-5 kg ​​ye-MILAX 100GB exutywe nesanti kwaye usasaze ngokulinganayo kwihektare enye (0. 4 – 0.5 kg/1,000 m2).
Ukuxuba nesigaba soku-1 sesichumiso: Emva kokuhlwayela iintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10, faka amanzi ukuchumisa isigaba soku-1, sebenzisa i-4-5 kg ​​ye-MILAX 100GB exutywe nomthamo wesichumiso esifunekayo ukusasazeka kwihektare enye.
Xuba nesanti ukuze usasazeke kwiindawo eziphantsi okanye imisele: Sebenzisa i-1-2 kg ye-MILAX 100GB exutywe ne-1-2 kg yesanti ukuze usasazeke.
☑ Emva kokusebenzisa iyeza, qhubeka nokugcina amanzi endle iintsuku ezi-1-2 ukuqinisekisa ukuba zonke iinkumba ziza kumphezulu kwaye zitye iyeza, emva koko ukhuphe amanzi kwaye uqhubeke nokuhlwayela irayisi njengesiqhelo.
☑ Musa ukusasaza izibulali zinambuzane kwiintsuku ezili-10 phambi kokuvuna.
I-DIOTO 250EC – 830 WDG
Ichiza lisebenza ngokukhawuleza kwimisebenzi yokuphefumula kunye nokugaya, ikhusela ukufunxa iswekile kunye nemetabolism, ngoko ke iinkumba azikwazi ukufunxa i-oksijini kunye nezondlo kodwa zife kuphela emva kwemizuzu eyi-15-30 yokutshiza.
Isithako esisebenzayo: I-Niclosamide, kukho iindlela ezimbini zamalungiselelo: Ifom ye-oyile emihlanu (EC), isiqulatho esisebenzayo se-250 gr / l kunye nefom ye-nuggets (WDG), umxholo osebenzayo we-830g / kg.
I-Dioto 250EC: idosi ye-1 ilitha ngehektare. Xuba i-100ml yeyeza kwibhotile ye-16-litre ukutshiza kwindawo enye (1,000m2).
I-Dioto 830WDG: idosi 200g/ha. Ngokuxhomekeke kwintsimi eneenkumba ezininzi okanye ezingaphantsi, inokuxutywa ukusuka kwi-20 ukuya kwi-60gr/16 yebhotile yelitha yokutshiza i-1,000m2.
Ukutshiza phambi kokuhlwayela: Kwiintsuku ezimbalwa phambi kokutyala, khokela amanzi entsimini, utsale iinkumba ukuba zivele, emva koko utshize, emva koko ulungise umhlaba ukuze uhlwayelwe njengesiqhelo.
Ukutshiza emva kokuhlwayela: Tshiza nje ukuba amanzi athatyathwe entsimini ukulungiselela ibhetshi yokuqala yomgquba (malunga neentsuku ezisi-7-10 emva kokuhlwayela).
Qaphela xa usebenzisa isitshabalalisi senkumba yeapile etyheli
☑ Kufuneka utshize ngenjikalanga epholileyo okanye kusasa. Nangona kunjalo, ngokutsho kwamava, kungcono ukutshiza kwindawo epholileyo emva kwemini, kuba iinkumba zihlala zivela kwaye zilume ihlumela zerayisi emva kwemini nangokuhlwa.
☑ Tshaza kwangoko nje ukuba kuvela iinkumba entsimini.
☑ Phambi kokutshiza, qiniseka ukuba kukho iinkumba entsimini.
☑ Musa ukutshiza ngerayisi yokulima ngaphantsi komhlaba (kuba inqanaba lamanzi entsimi liphezulu kakhulu).
☑ Musa ukutshiza amayeza okubulala izitshabalalisi kumasimi angenazibhanki, iifama zeentlanzi kunye namachibi okulima emanzini.
☑ Xa utshiza, gcina umgangatho wamanzi malunga ne-3-5cm. Emva kokutshiza, qhubeka ugcine amanzi kangangeentsuku ezi-2 ubuncinci ukubulala zonke iinkumba eziseleyo.
Thuốc Waisan 50mg là gì, có công dụng như thế nào? | Hatgiongtihon.net
5 Giải pháp thuốc phòng trị Bệnh Xoăn Lá hữu hiệu cho cây trồng | Hatgiongtihon.net